लकडाउन सहज बनाउँदै शैक्षिक क्षेत्र पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ -
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:०१ May 14, 2020 khullapatiLeaveaComment on लकडाउन सहज बनाउँदै शैक्षिक क्षेत्र पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ
-प्याब्सन सल्लाहकार आशीष श्रेष्ठ
शैक्षिक सत्रको सुरुवातबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । म पनि ६० सालदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा छु । मैँले शैक्षिक क्षेत्रमा माओवादी द्धन्ददेखि, जनआन्दोलन, भूकम्प लगायतका विविध समस्याको सामना गरेको छु । शैक्षिक सत्र सुरुवातताका विगतका अवस्थामा पनि यसरी बन्द त भएकै हुन् ।
हाम्रो २२० दिन विद्यालय सञ्चालन गर्दै शैक्षिक कार्यतालिका समस्याका बेला मिलाएका थियौँ । अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ । अहिले पहिले जीवन अनि शिक्षा भन्ने मनोविज्ञानमा धेरै अभिभावक पाएको छु । शैक्षिक सत्र असार साउनदेखि नै सुरु गर्दा के होला भन्ने पनि छ । यसमा आपत्ति छैन तर कोरोना ठ्याक्कै निर्मूल पारेर शैक्षिक क्षेत्र सुरु गर्न भने ढिलो हुनेछ । केही युरोपका मुलुक हेर्दा पनि कोरोना सँगै बाँचौ त्यसैले अब सुरु गर्नुपर्छ ।
मेरो कुरा अरुलाई के भनेको होला भन्ने लाग्ला तर विश्वको उदाहरण हेर्दा अब विस्तारै त्यता पटि लागेर जीवन सहज बनाउन लाग्नुपर्छ । गत वैशाख १८ मा हामीले २६०० नेपालीहरु नेपाल भित्र्यायौँ त्यतिबेलै अहिलेजस्तो ह्वाह्वार्र्ती देखिनुपथ्र्यो नि देखिएन । यस अर्थमा अहिले किन बढ्यो भन्दा राति राति लुकीछिपी आउने बढे ।
उनीहरुले कोरोना ल्याए तर सँधै आँत्तिरहने भए कसरी जीवन चल्छ त ? अब आँत्तिने हतासिने भएर कहाँ हुन्छ ? स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरण भारतमैँ छ त दिल्लीमै दैनिक संक्रमण बढेपनि उसले ट्रेन चलाएको छ त ।
अभिभावकसँग हामी निरन्तर पहुँचमा छौँ । सम्पर्क स्थापित गरिरहेका छौँ । कोरोनाले एकाएक आएको समस्यासँगै हामीलाई चुनौती र अवसर दुवै आएको छ । विगतमा एक टेलिफोन, मोबाइल, रेडियो, टिभी हुँदै अनलाइनको अवस्थामा पुगेका छौँ । यो जरुरी छ भन्ने महशुश गरेरै हामीले हाम्रा साँढे १२ सय विद्यार्थीसँग समन्वय गर्ने प्रयास थालियो ।
हामीले पनि पटक पटक कोशिश गर्यौँ । हाम्रो हकमा १० प्रतिशत मात्र अभिभावक मात्र इन्टरनेटको े पहुँचमा रहेको पायौँ । अब सबैलाई समेट्दै कसरी शैक्षिक क्रियाकलाप कायम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर हालै मकवानपुर जिल्लाभरी अनलाइन कक्षा स्थगित गरिएको छ ।
अब यसबारे सबैले छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय लिन्छौँ । सबैसँग इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन सरकार लाग्नुपर्ने देखियो । हामी तत्कालका लागि एन्ड्रोइट मोबाइल, सकिन्छ ल्यापटप, ट्याबको व्यवस्थापन हुन सके सहज व्यवस्थान हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।
यसकारण सरकार गुहार्नुपर्यो
निजी विद्यालय मात्र होइन सबै क्षेत्रमा समस्या पर्दा हाम्रोमा पनि परेको छ । अभिभावकको शुल्कबाट हामी चल्नुपर्छ । कहिले खुल्ने अन्यौलको अवस्था बढेमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको किस्ता लगायतका समस्या टार्न हामीले सरकार गुहारेका हौँ ।
भर्ना थाल्ने कि बस्ने ?
भर्ना, परीक्षाको बारेमा विविध खाले टीका टिप्पणी भैरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पनि पटक पटक विभिन्न विज्ञप्ति जारी भए । तर अहिले केही पनि अनुमान गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । प्याब्सनले एक निर्देशन जारी गर्दै जेठ ५ पछि मात्र यसबारे निर्णय गर्ने अहिले रोक्ने भनेकाले अहिले चुप बस्नुपर्ने छ ।
भदौबाट कक्षा सञ्चालन भए वैशाखबाट फि तिर्ने हो अभिभावकले ?
यो विषय अलि पेचिलो छ । भूकम्पको अनुभव हामीसँग छ । त्यसबेला हामीले २५ प्रतिशत मासिक शुल्क छुट दिएका थियौँ । त्यसबेला भूकम्पबाट बढी प्रभावित विद्यालय साउन भदौबाटै खुलेका थिए तर शुल्क भने अगाडिदेखिकै उठाएर शिक्षक कर्मचारीको तलब मिलान गर्ने भन्ने भएको थियो ।
हामीलाई संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिकाले हाम्रो शुल्कको ६० प्रतिशत तलबभत्तामा, १४ प्रतिशत घरभाडा तथा व्याज, ७ प्रतिशत शिक्षण सामग्री व्यवस्थापन, साँढे ९ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा र बाँकी बसेको साँढे नौ प्रतिशत मात्रै हाम्रो नाफा हो । त्यही मुनाफाको शुल्क नै छुट दिने हो । यसबारे अझै होमवर्क गर्नुपर्छ । विद्यालयको अवस्था पनि यसमा भरपर्छ । सरकारले शुल्क फिर्ता वा छुटबारे निर्णय सरोकारवालासँग समन्वय नगरी गरेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यो जनतामा राहत दिएर पपुलारिटी खोजेजस्तो देखिन्छ ।
एसइई परीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
एसइई परीक्षाबारे प्याब्सनले एक सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ । अब विद्यार्थी परीक्षा दिन सक्ने भन्दा उनीहरुमा मानसिक त्रास भएका कारण यस पटकका लागि आन्तरिक मुल्याङकनकै आधारमा लागौँ । हिजो पनि हामी क्यास अर्थात कन्टिनिअस एसेसमेन्ट सिष्टमका आधारमा अघि बढ्नु उपर्युक्त हुन्छ । यो यस पटकका लागि मात्र भनिएको हो । तर केही मिडियाले यसलाई अन्य कुराको रुपमा उचालेको पनि पाईयो ।
संस्कृतको विरोध नगरौँ
संस्कृत भाषाबारे सरकारले अहिले गरेको निर्णय निकै जायज छ । हेटौँडामा हामी पहिलो स्कुल हो जसले संस्कृत सुरु गरेको छ । हामीले गतवर्षदेखि नै लगाएका छौँ । यो जरुरी छ ।
निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)का केन्द्रीय सल्लाहकार श्रेष्ठसँग खुल्लापाटी डट कमले गरेको खुल्ला बहसमा श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । यहाँहरुले खुल्लापाटी डट कमको फेसबुक पेज लाइक गरी भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । खुल्लपाटी डट कमको खुल्ला बहस हरेक दिन आउने गर्छ । कार्यक्रममा सहभागिता र विषयगत एजेण्डा राख्न मन भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
आशीष श्रेष्ठसल्लाहकार – प्याब्सनसञ्चालक – तुल्सीमेयर मेमोरियल उच्च मावि, हेटौँडा
Gepostet von Khullapati am Donnerstag, 14. Mai 2020
Tagged आशीष श्रेष्ठ प्याब्सन सल्लाहकार आशीष श्रेष्ठ
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा त्रुटि, सामाजिक सञ्जालमा मजाक उडाईँदै
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सदनमा पेश हुँदै
४ श्रावण २०७७, आईतवार १२:३७ July 19, 2020 khullapati
२९ असार २०७७, सोमबार ०७:४४ July 13, 2020 khullapati
तीन जिल्लाका सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइयो १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:०१
काठमाडौँमा अझै १८ हजार बढी निरक्षर १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:०१
सूर्यविनायक नगरपालिकाले आजदेखि विद्यालय खोल्यो १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:०१
आज राष्ट्रिय बाल दिवस, विविध कार्यक्रम गरी मनाईँदै १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:०१
सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाइयो ऋषि पञ्चमी पर्व १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:०१